बुबालाई डिप्रेसन हुँदा सन्तानलाई असर! | Sagarmatha TV
बुबालाई डिप्रेसन हुँदा सन्तानलाई असर!
आमाको डिप्रेसनले बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पूराउने तथ्य त जगजाहेर नै छ । विभिन्न अध्ययनहरुले यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । तर एक नयाँ अध्ययनले भने केवल आमाको मात्र होइन बाबुमा हुने डिप्रेसनले समेत भावी सन्तानको स्वास्थ्यमा असर पार्ने तथ्य पत्ता लगाएको छ ।
पिताको डिप्रेसनले गर्भको बच्चामा पर्ने असरका बारेमा व्याख्या गर्दै उनले पार्टनर डिप्रेसन ग्रस्त हुँदा गर्भवती महिलामा चिन्ता थपिने र त्यसले गर्भवती समेत डिप्रेसनमा फस्ने जोखिम रहने बताएका छन् । यसरी गर्भवती महिलामा डिप्रेसन हुँदा उनले समय भन्दा पहिले नै बच्चा पाउने जोखिम बढ्दछ ।
गर्भ नरहँदैको अवस्थामा पितामा हुने डिप्रेसनले पनि भावी बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्दछ । डिप्रेसनका कारण पुरुषको शुक्रकिटको गुणस्तरमा क्षयीकरण हुन्छ । यसकारण त्यस्तो पुरुषको शुक्राणुबाट गर्भाधारण भै विकशित भएको भ्रुणको डिएनएमा प्रभाव पर्दछ । यसले गर्भको बच्चाको शारीरिक तथा मानिसक वृद्धि विकासमा असर पुग्दछ ।